July | 2009 | Mg Ogga's Notes
မိုးကောင်းကင် တိမ်များထဲ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ငါ့နှလုံးသားမီးထောက် ဘယ်သူလက်လှမ်းမှီမလဲ လူသူမရောက်တဲ့နက္ခတ်တစ်စင်း မင်းကိုလမ်းပြမဲ့ အတ္တမဲ့အလင်း အစွန်းထင်းကင်းမဲ့လှ ဟိုးကအမှောင်ထုကိုဖြိုချလိုက်တော့………… မင်းအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ငါနှလုံးသွေးစက်တွေ မြေပြင်ပေါ်ကျလာတိုင်း ပန်းတစ်ပွင့်ပွင်ခဲ့ပေါ့ ဟိုရှေ့ကမိုးကုတ်စက်ဝိုင်း မြေလွာကိုနင်း နေမင်းရှိရာ ငါဦးတည်လာပြီ မင်းဆီ နှလုံးသွေးက စိမ့်ထွက်လာတဲ့ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ.ခြင်ဆီ အချစ်တွက်ပူဇော်သည်။ Advertisements
တစိမ်းတရံတွေရှေ့မှာ တာ ပြုံးနေနိုင်မယ်ဆိုတာ ကျနော်သိတယ်။ လောကရဲ့အမှောင်ချထားတဲ့ ကျားကွက်တွေကြား တာ ရှိးရှိးသားသားကစားနိုင်မယ်လို. ကျနော်ယုံတယ်။ ကိုယ်ကောင်းရင်ခေါင်းမရွှေ့ဆိုတဲ့စကား ရှိသားပဲ တာ။ ကြိုးစားထား တာ အားတင်းပါ ယုံကြည်ရာရွက်လွင် တနေ.တော့ ပန်းတိုင်ရောက်မပေါ့ ဘယ်သူမှာဘေးနားမရှိတောင် အထီကျန်မဆန်စေရဘူး တာ အားတင်းထား တာ ပန်းတိုင်ရောက်လုပြီ။ အမှောင်ပြီးရင်အလင်းလာမယ်မဟုတ်လား အားတင်းထား တာ……..
July 22, 2009 in ကဗျာ.
တောင်တန်းပြာပြာလေးတွေကိုနောက်ခံထားထားပြီးလှချင်တိုင်းလှပနေတဲ.ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို.လေးကနေ တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ကားလေးမောင်းပြီးတောင်ကုန်းပေါ်က မန်ကျည်းတောအုပ်သေးသေးလေးကိုဖြတ်သန်ကာလှပသေသပ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ.ရွှံအိမ်လေးများရှိရာခြံကလေးဆီသို.ကျွန်မတို.ရောက်လာကြတယ်။ ခြံထဲ ကိုဝင်လိုက်တာနဲ.ရင်ထဲအေးပြီး အမောအပန်းတွေဘယ်ပျောက်သွားလဲ မသိတော့ပါဘူး။ပထမဆုံးတွေတဲ့ ရွှံအိမ်လေးထဲ မှာခဏနားနေတုန်းမှာပဲ အင်္ကျီနွမ်းနွမ်းဝတ်ထားတဲ့ ထိုင်းအမျိုးသားကြီးတစ်ယောက်ဟာ လတ်ဆတ်တဲ့ အပြုံးကိုဆင်ယင်ပြီး ကျမတို.ဆီ ခပ်ခပ်သွက်သွက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့ ရွှံ့ခုံလေးမှာ သူလွယ်အိပ်ဟောင်းလေးကိုတင်ပြီး ရယ်မောဖော်ရွှေစွာ နှုတ်ဆက်စကားပြောကြတယ်။နောက်တောင်ကုန်း လေးပေါ်က သူ့အိမ်လေးဆီသွားဖို.ဖိတ်ခေါ်တယ်။ မနေ့ကထဲက ဒီ ဖန်ဖန်ဆိုတဲ့ ခြံလေးအကြောင်းစကြာြးဲပီး သွားရမယ်ဆိုကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေတာ အခုတော့တကယ်ဆုတောင်းပြည်.သွားတာပေါ။့ဒီခြံကလေးက တကယ်ကိုအေးချမ်းပြီး စိတ်ချမ်းမြေ.စရာနေရာ လေးတစ်ခုပါ။ အိမ်ရှင်ခေါ်လာလမ်းအတိုင်းတောင်းကုန်းလေးပေါ်တတ်လာရင်း ဘေးဘီကိုကြည်တော့ သီးပင်စားပင်တွေခြံရံ ခြံရံထားပြီး ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ နေချင်စရာရွှံ.အိမ်လေးတွေ ကိုကျမတို.အဖွဲ.ကလူတွေက ဓာတ်ပုံ တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ အိမ်သာပါမကျန် အားရပါရကို မှတ်တမ်းတင်ကြတာပေါ့။ကျမနဲ့အတူပါလာတဲ့ ဆရာမတစ် ယောက်ရဲ. ၄နှစ်အရွယ်မြေးမလေးက “အဘွားဘာလို.အိမ်လေးတွေကဒီလောက်လှနေတာလဲ”မေးလိုက်တော့ အိမ်ရှင်အဖိုးကြီးရဲ.မျက်နှာကပီတီအပြုံးတွေဖြာလိုပေါ့။ နောက်အိမ်လေးဆီရောက်တော့ ဒီခြံလေးအကြောင်းနဲ့သူရဲ့ဘ၀အကြောင်းတွေကို ကျမတို.ကိုပြောပြလို. စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းတဲ့ ဒီဖန်ဖန်ခြံလေးနဲ. ဦးလေးကြီးအကြောင်း…
July 16, 2009 in စားသုံးသူဝါဒအကြောင်း, အတွေ့အကြုံ.
လူပြိန်းတွေရင်ခုန်ဖို. နှလုံးသားကို မိတ်ကပ်မလိမ်ကြနဲ့ ကြည်.တတ်မြင်တတ်တန်ဖိုးထားတတ်မှ နှလုံးသားအလှကိုမြင်မယ် အမှန်းတရားနဲ. ဆုံးပါးသွားတဲ့ လူတွေမနည်း ကဲ သတိထားကြ သတိထားတာ အသိတရားရဲ.ကိုယ်ရံတော် အရှိတရားကို ကြည့်မမှားစေဖို. သိထားရမယ်။
July 14, 2009 in ကဗျာ.
အခင်းအကျင်း မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ရွာတစ်ရွာအစွန်မှာ ရှိတဲ့ အိမ်လေးနှစ်အိမ်ကြားအတွင်း မြေလွတ်လပ်လေးရှိ တယ်။ဒီမြေကွက်လပ်လေးမှာ ကလေးများ ဘောလုံးကန် ကြရာနေရာလေးလည်းရှိတယ်။ အိမ်၁ အင်း တိမ်တွေကြည်.ရတာ မိုးရွာတွေမဲ့ အရ်ိပ်ရောင်ပဲ မနက်ဖြန်မိုးရွာရင်ကောင်းမှာပဲ မိုးရွာတာနဲ့ ပျိုးကြဲလို. ရပြီ မိုးရွာမယ်ထင်ပါတယ်။မိုးရွာပါစေဗျာ။ အိမ်၂ မိုးသားတွေကြည်.ရတာရွာမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး အင်း မိုးမရွာမှဖြစ်မယ် မိုးရွာရင် စပါးတွေရေစိုကုန်မှာ မိုးမရွာမှ စပါးလှန်းပြီးကြိတ်ရ မယ်။မိုးမရွာဘူးထင်ပါရဲ.။မိုးမရွာပါစေနဲ.ဗျာ။ အ်ိမ်၂အ်ိမ်ကလူနှစ်ယောက်ဟာ အိမ်ရှေ့ ကွပ်ပစ်လေးပေါ်ထိုင်ပြီး အတွေးကိုယ်စီနဲ.တစ်ယောက်ကကွမ်းဝါး တစ်ယောက်က ပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ်ကြီးဖွါ လို. ကိုယ်အတွေနဲ့ကိုယ်ရှိနေချိန်မှာ ရှေ့ကွင်းပြင်တွင် ကလေးတွေဘောလုံးကန်ရန်တာစူနေကြပြီ ရွာသားကလေးတွေဆိုပြီး အထင်မသေးနဲ့ဗျ နိုင်ငံတကာဘောလုံးပွဲတွေလို မြောက်ပန်းလှန်ပြီး ကွင်းနဲ့ဘောလုံး ဘယ်သူယူမလဲလုပ်နေကြတယ် အခုခေတ်ကြီး က အကြွေစေ့ရှားလာပြီ တောမှာဘိုးဘွားတွေစုထားတဲ့ အကြွေစေ့တွေကလည်း မြို.ကလူတွေ လာလာဝယ်ကြလို. အခုခေတ်ကလေးတွေမြင်တောင်မမြင်ဖူးကြတော့ဘူး ဒီတော…
July 14, 2009 in ခံစားမိသမျှ, ဝတ္ထုတို.
သူငယ်ချင်း မင်းလုပ်သမျှအဆင်ပြေ ပျော်စရာပဲကြုံတွေလဲ ပျော်စရာထဲ မရစ်မှုးမနေနဲ့ နှလုံးသွင်းပါ သင့်တင်စွာ ယောနိသောမနာသီကာ။ သူငယ်ချင်း မင်းလုပ်သမျှအဆင်မပြေ စိတ်ညစ်စရာတွေ တွေကြုံနေ စိတ်မညစ်ပဲ နှလုံးသွင်းပါ ယောန်ိသောမနာသိကာရာ။ စေတနာထားကာလုပ်ဆောင်ပါ ဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါ ဥပက္ခာပြုပါ ငြိမ်းအေးစွာ ယောနိသောမနသ်ကာရာ။
July 14, 2009 in ကဗျာ, ဘာသာရေးရာ.
ဂုဏ်ကြက်သရေ နဲ့နာမည်ကောင်းတွေကို တရားမ၀င်မှောင်ခိုလုပ်ထား တဲ့ လူကြီးလူကောင်းလူသူတော်ကောင်းကြီးသည် အမှားများကို အမှန်နေရာသို.ခိုးယူတင်ပို.နေကြသည် ငွေရောင်အောက်မှာ အမှန်တရားအစစ် တိပ်ဆိပ်နေတတ်သည် အမှန်တရားရဲ.ဘက်တော်သားများသည် အဓမကိုပေရာလကန်ပြုပြီး ဧကစာရီကျင့်ကြံနေထိုင်ကြသည် သူတို.ယုံကြည်ရာတွေဟာ စကားလုံးဖြစ်တည်မှုနဲ.လူဘောင်မှာ မမောမပန်းကူးသန်းနေကြသည် နိဗာန်ကို တံတားထိုးထားတဲ့ တရားကြိုးတန်းပေါ်မှာ အဓမ္မကို မဖျက်နိုင်ပဲ လှုပ်လီလှုပ်လဲနဲ. ငုတ်တုတ်မေ့နေရဲ့……………
July 14, 2009 in ကဗျာ, ဟာသသရော်စာ.